Hazvina zvebhaibheri kuvakadzi vapristi | Apg29
- Uye kwete varume kana!
Sungano itsva (New Testament) sezvo vapristi Sungano Old racho zuva. Tinogona kuenda Mwari uye kubudikidza naJesu Kristu!
Kune vaya vanoshora vakadzi vapristi uye anotenda kuti zviri muMagwaro. Asi chokwadi ndechokuti sezvo unbiblical nevapristi makono.
Sungano itsva (New Testament) sezvo vapristi Sungano Old racho zuva. Vaiva Vanoyemurika kuuya Muprista - Priest Jesu Kristu.
Vatendi vose vaprista
Uyezve, nhasi vapristi vose vari kuponeswa uye kutenda muna Jesu. All tine kuonana Mwari kuburikidza nokutenda muna Jesu Kristu. Kwete diki vanosarudza boka akadana vapristi sungano yekare.
1 Pt 2: 9. Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu; kuti murege kuzivisa mabasa ake anoshamisa kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa.
Naizvozvo, zvinova zvakaipa Kusimbisa kukurukura uye vanhukadzi vapristi. Kukurukurirana zvinofanirwa kutanga kana zviri zvachose mubhaibheri norudzi vafundisi vari mukereke Swedish kwakadaro uye kwete mudukusa Catholic.
Tinogona kuenda zvakananga kuna Mwari
Hatidi pari chero muprista yepasi sezvo murevereri kusvika Mwari. Tinogona kuenda Mwari uye kubudikidza naJesu Kristu! Akavhura itsva mhenyu nzira kuburikidza pamuchinjiko weKarivari.
VaHebheru 10:19. Sei isu, hama, tine zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu, 20 nenzira itsva uye mhenyu nzira iyo akazarura kwatiri kubudikidza nechidzitiro, kureva, nyama yake;
Zvino munhu anogona kugamuchira Jesu uye uchaponeswa uye mwana waMwari. Unoda shamwari yangu yepamwoyo kugamuchira Jesu uye uchaponeswa kana zvakadaro hamuna kuzviita?